တက္ကသိုလ် vs. ကောလိပ်: အ Difference ကဘာလဲ?
by Kelci လင်း Lucier
လူအတော်များများ, ကောလိပ်ကျောင်းသားများက ပါဝင်သည်တစ်ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်အကြားခြားနားချက်များ၏အပြည့်အဝသတိပြုမိကြသည်မဟုတ်။ အမည်များကိုအပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုနေစဉ်တကယ်တော့သူတို့မကြာခဏလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောကျောင်းမှအစီအစဉ်များကိုရည်ညွှန်း။ သငျသညျအခြို့ကျောင်းလျှောက်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ခင်မှာကတခြားကနေတစျခုနှငျ့ခှဲခွားသိသောအရာကိုသိရန်ကောင်းပါတယ်။
တက္ကသိုလ် vs. ကောလိပ်: ကြသူများအဆိုပါဘွဲ့
ယေဘုယျအားဖြင့် - ကောလိပ်များမှသာပူဇော်နှင့်ဘွဲ့ကြိုအစီအစဉ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက် - ခြင်းနှင့်သင်တန်း၏, ချွင်းချက်ရှိပါသည်။ လေးနှစ်ကျောင်းကဘွဲ့ရဲ့ဒီဂရီပူဇော်စေခြင်းငှါနေစဉ်, အများအပြားအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်အငယ်တန်းကောလိပ်နှစ်ခုသာနှစ်သို့မဟုတ်တွဲဘက်ရဲ့ဒီဂရီကိုဆက်ကပ်။ တချို့ကကောလိပ်များအဖြစ်ကောင်းစွာဘွဲ့ရလေ့လာမှုများပူဇော်လုပ်ပါ။
အများစုမှာတက္ကသိုလ်များ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဘွဲ့ကြိုနှင့်ဘွဲ့လွန်နှစ်ဦးစလုံးဒီဂရီကိုဆက်ကပ်။ ရယူလိုသူအလားအလာကောလိပ်ကျောင်းသားများကို မဟာသို့မဟုတ် Ph.D ဘွဲ့ကို ဖြစ်နိုင်ဖွယ်တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အတော်များများကတက္ကသိုလ်အဆောက်အဦများကိုလည်းဘွဲ့ကြိုအစီအစဉ်များတွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အလုပ်အကိုင်အတွက်အထူးပြုကောလိပ်ပါဝင်သည်။ ဤသည်အများဆုံးမကြာခဏပင်ဖြစ်သည် ဥပဒေကျောင်းကို သို့မဟုတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းက ပိုပြီးကြီးမားတဲ့တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ထီးအောက်မှာကြောင်း။
ဟားဗတ်ကောလိပ်၏ဘွဲ့ကြိုကျောင်း ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ။ ကျောင်းသားများသည်ကောလိပ်ကျောင်းမှမိမိတို့လစ်ဘရယ်အနုပညာဘွဲ့ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့မဟာသို့မဟုတ်ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုလိုက်ရန်တက္ကသိုလ်မှာဘွဲ့ရအစီအစဉ်ကိုသို့ပြောင်းရွေ့စေနိုင်သည်။
အဆိုပါ မီချီဂန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ကြိုဒီဂရီနှင့်ဘွဲ့ရဒီဂရီနှစ်ခုလုံးကိုပေးထားပါတယ်။ ကျောင်းသားများ, ဥပမာ, ကျောင်းများပြောင်းလဲနေတဲ့မပါဘဲနိုင်ငံရေး, ပြီးတော့ဥပဒေဘွဲ့အတွက်ဘွဲ့ဘွဲ့ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကောလိပ်တက္ကသိုလ်များထက်သေးငယ်တဲ့ကျောင်းသားခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဒြေရှိသည်ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ ဤသည်ကိုသူတို့ပူဇော်ကန့်သတ်ဒီဂရီပရိုဂရမ်များ၏သဘာဝရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ တက္ကသိုလ်များဘွဲ့ရလေ့လာမှုများပါဝင်သည်သောကြောင့်, ပိုပြီးကျောင်းသားများကိုတစ်ကြိမ်မှာထိုကျောင်းများသို့တက်ရောက်ရန်နှင့်ပိုပြီးန်ထမ်းကျောင်းသား '' လိုအပ်ချက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
တက္ကသိုလ်များကိုလည်းကောလိပ်ထက်ဒီဂရီများနှင့်အတန်းတစ် သာ. ကြီးမြတ်အမျိုးမျိုးပူဇော်လေ့ရှိကြသည်။ ဤသည်အကျိုးစီးပွားနှင့်လေ့လာမှုများတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်ခင်းကျင်းနှင့်အတူတစ်ဦးထက်ပိုသောကွဲပြားခြားနားကျောင်းသားလူဦးရေစေပါတယ်။
ထိုနည်းတူစွာ, ကျောင်းသားများကောလိပ်စနစ်အတွင်းသေးငယ်အတန်းသူတို့တစ်တွေတက္ကသိုလ်အတွက်အလိုတခုတည်းထက်တှေ့လိမျ့မညျ။ တက္ကသိုလ်များတစ်ဟောပြောပွဲခန်းမ 100 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကျောင်းသားတွေနဲ့အတူသင်တန်းများရှိစေခြင်းငှါနေစဉ်, ကောလိပ်မှသာ 20 သို့မဟုတ် 50 ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူအခန်းတခန်းထဲမှာအတူတူသင်တန်းဘာသာရပ်ပူဇော်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကျောင်းသားပိုမိုတစ်ဦးချင်းစီအာရုံစိုက်မှုပေးထားပါတယ်။
နောက်ဆုံးတွင်, သင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် လေ့လာမှုအဘယ်သို့သောလယ်ဆုံးဖြတ် သင့်ကိုလိုက်ချင်နှင့်သငျသညျ (ရှိပါက) တက်ရောက်ရန်ပိုမိုမြင့်မားသင်ယူမှုအဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလမ်းညွှန်ကြကုန်အံ့။
သငျသညျသေးငယ်အတန်းအစားအရွယ်အစားနဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုချင်လျှင်တစ်ကောလိပ်သည်သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကျောင်းသားခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှဘွဲ့ရဒီဂရီသင့်ရဲ့မဖြစ်မနေ-ရှိစာရင်းတွင်များမှာလြှငျမူကား, တက္ကသိုလ်သို့သွားနိုင်ရန်လမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဝီလျံကောလိပ် - ဤဓာတ်ပုံခရီးစဉ်အတွက်ကျောင်းပရဝုဏ် Explore
Dartmouth College ကဓာတ်ပုံလှည့်လည်
ကောလိပ် Profiles တစ်ပြည်နယ်-by-ပြည်နယ်စာရင်း
ဓာတ်ပုံခရီးစဉ် Cal ပြည်နယ် Long Beach
Cal State University တွင်ဖူလာဓာတ်ပုံလှည့်လည်
Z ကိုမှကောလိပ် Profiles တစ်ဦးက
အနုပညာအတွက်ရေးစပ်သီကုံးမှု၏ 8 Element တွေကို
အမြင့်ကတ် flush Play မှလေ့လာပါ
သင့်ရဲ့အဆင့်မြင့်ကိုယ်ပိုင်အတူ align လုပ်ဖို့
သြရီဂျင်: သံမဏိ၏က Man ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဝေလငါး, လင်းပိုင်သို့မဟုတ်လပိုင် - အမျိုးမျိုး Cetaceans ၏လက်ခဏာ
"Hamlet" မှအကောင်းဆုံးက Non-Hamlet Monologues
ဘုရင်မကြီးဗစ်တိုးရီးယားအကြောင်းသိထားမှ6အချက်အလက်
ဂေးအဖြစ်ယေရှုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ "Corpus Christi" လို့ခေါ်မယ့်ရုပ်ရှင်ရှိ၏လော
Ornithopod ဒိုင်နိုဆောရုပ်ပုံများနှင့် Profiles
Penguins အကြောင်း7စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်
Access ကို 2007 ခုနှစ်တွင် Scratch ကနေ Database ကိုဖန်တီးနည်း
စိုက်ပျိုး, ထှနျးကားများနှင့်စျေးကွက်တော်ဝင် Paulownia
အကြံပြုချက်များပန်းချီ Find လုပ်နည်း
Superconductor အဓိပ္ပာယ်, အမျိုးအစားများနှင့်အသုံးပြုခြင်း
Justin Gatlin: အငြင်းပွားဖွယ်ရာ Sprint စတား